परमेश्वरको परिभाष र अस्तित्व – भाग २ – Daily Devotion
ख. बाइबलले परमेश्वरको अस्तित्व मानिलिन्छ
बाइबलले यो कुरा मान्दछ गर्दछ कि सबै मानिसले परमेश्वरको अस्तित्वमा विश्वास गर्छन् । यसले परमेश्वरको अस्तित्व प्रमाण गर्ने प्रयास गर्दैन । बाइबलको सुरुवात यसरी हुँदछ, “आदिमा परमेश्वर…” (उत्पति १ः१), र यसरी बाइबलभरी नै उहाँको अस्तित्व स्वीकारिएको छ । मानिसको विवेक परमेश्वरको सचेतनाले भरिएको हुदछ । त्यसैले धर्मशास्त्रका लेखकहरुले उहाँको ज्ञानले भरिपूर्ण भएर निश्चयतासाथ उहाँको अस्तित्व स्कीकार गरी लेखे ।
ग. परमेश्वरको अस्तित्व विभिन्न तर्कद्वारा पुष्टि हुँदछ
तर्कहरुको अध्ययन गर्दा यी कुरा ध्यान दिनुपर्दछ कि यी प्रमाणहरु परमेश्वरको अस्तित्व जनाउने पर्याप्त र ठोस् प्रमाणहरु होइनन् । यी केवल उहाँको अस्तित्व सुनिश्चित गर्ने बाहिरी चिन्हहरु मात्र हुन् । अर्को कुरा, परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र हामीले भौतिक पदार्थ वा देखिने कुरालाई लिएर उहाँको अस्तित्वमा जोड दिन सक्दैनौ । तर उपयुक्त तत्वहरुलाई लिएर उदाहरणको लागि तुलना गर्न सक्छौँ । यी प्रमाणहरु केही सहायक मात्र हुन्, कुनै पनि एक प्रमाणले मात्र उहाँको अस्त्तिलाई विश्वास गर्ने आधार दिदैन ।
१. आकाशमण्डलको आधारमा तर्कः
यसको तर्कअनुसार “सुरु भएको हरेक कुराको पर्याप्त कारण हुनुपर्छ” हो । यस आकाशमण्डलको पनि सुरुवात भएको हो जसको कारण हुनुपर्दछ । हिब्रू ३ः४ अनुसार, “हरेक घर कुनै नै कुनै मानिसबाट बनाइएको हुन्छ, तर सब थोक बनाउने त परमेश्वर नै हुनुहुन्छ ।” बुसवेल का अनुसार, यदि केही कुरा सुन्यताबाट आएको होइन भने त्यो अनन्तदेखि हुनुपर्छ । यस अन्तरिक्ष पनि कि त अनन्तको निम्ति हुनुपर्छ, वा यसलाई सम्हाल्ने कोही हुनुपर्छ । खगोल–विज्ञानको अनुसार अन्तरिक्ष र भुगोलमा ठूलो परिवर्तन भएको छ जसको कारण पृथ्वी पनि परिवर्तित छ । पृथ्वीको अस्तित्व केही कुरामा निर्भर छ । हरेक भाग केही न केही कुरा जोडिएर निर्भर छन् । यदि यी कुराहरु आपैm सुन्यताबाट आएको हो भने यसरी निर्भर हुन आवश्यक हुदैन । त्यसकारण, त्यहाँ पहिलो सृजना गर्ने कोही हुनुपर्छ । Law of Thermodynamics को दोस्रो नियमअनुसार यस अन्तरिक्षको उर्जा कम हुदैछ । यसको मतलब यो आपैmमा निर्भर भएर सुचारु भएको छैन, तर यसको सुरुवात भएको हुनुपर्छ जसको सृजक हुनुपर्छ ।
यस तर्कअनुसार हरेक सृष्टि भएको थोकको बाहिरी कारण हुनुपर्छ । तसर्थ यस आकाशमण्डल कसैबाट सुरुवातमा ल्याइएको हो । तर यस तर्कको कमजोरी भनेको यो हो कि, “यदि सबै सुरुवातको कारण छ भने परमेश्वरको पनि छ ।” यसरी नटुङ्गिने चक्र हुँदछ । तर यस तर्कले यो कुरा स्पष्ट पार्छ कि पहिलो कारण, अर्थात् परमेश्वर, सबै कुराभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ ।
२. सासमाञ्जस्यको आधारमा तर्कः
व्यवस्थित रुप भएको संरचनाले एक वौद्धिक कारण हुनुपर्छ भन्ने देखाउछ । यस आकाशमण्डल सुव्यवस्थित छ र यसको कारण पनि एक रचयता हुनुपर्छ । भजन लेखकले भन्दछ, “जब म तपाईंको हातले बनाएको आकाशलाई, र तपाईंले स्थापित गर्नुभएको जून र ताराहरुलाई विचार गर्छु मानिस के हो र तपाईं त्यसको वास्ता राख्नुहुन्छ ? मानिसको छोरो के हो, र त्यसको फिक्रि गर्नुहुन्छ ?” (भजन ८ः३) । भजन १९ः१, भजन ९४ः९) ।
कतिले यस्तो पनि विचार गरे कि सम्पूर्ण व्यवस्थापन कुनै पनि निर्माणकर्ता बिना अचानक हुन आयो । तर प्रकृतिको नियमहरुलाई नियाल्दा यस्तो कुरा विश्वास गर्नु अप्ठ्यारो हुँदछ । यी प्राकृतिक तत्वहरु दैविय नियन्त्रण विना आपैm व्यवस्थित भएर थामिराखिन असम्भव देखिन्छ । कसले बनायो हिमपात र मौसमहरु ? यी सबै कुराहरुले एक अलौकिक निमार्णकर्तालाई देखाउछ । रोमी १ः१८–२३ ।
Tags: existence of God, faith